“Messi wuxuu in badan ka sareeyaa Ronaldo” – Javier Tebas oo dhulka ku jiiday Cristiano – Gool FM
“Messi wuxuu in badan ka sareeyaa Ronaldo” – Javier Tebas oo dhulka ku jiiday Cristiano
(La Liga) 18 Dis 2018. Madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga ee Javier Tebas ayaa xaqiijiyay in Lionel Messi uu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan caalamka, isla markaana uu ka sareeyo dhamaan ciyaartoyda kale ee kubada cagta uu qeybta ka yahay Cristiano Ronaldo, isagoo tilmaamay in arintaas ay marqaati ka tahay kulankii ugu dambeeyay ay ciyaartay Barcelona.
Javier Tebas ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Sport” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay in shaki la’aan Messi uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican aduunka.
“Messi wuxuu in badan ka sareeyaa Ronaldo, hadii aad dhaleeceyneyso Lio isla markaana aad sheegto inuusan ahayn kan ugu fiican aduunka xiligan la joogo, waxaa hubaal ah inaadan waxba ka fahansaneen kubada cagta”.
“Qof walba ee Messi ku daawaday kulankii ugu dambeeyay ay la ciyaareen kooxda Levante, xitaa hadii uu yahay taageere koox kale waa inuu siibaa maaliyada kooxdiisa, isla markaana uu sidoo kale iska dhigaa ookiyaalaha midabka leh uu ku arkayo kaliya kooxdiisa”.
“Dhammaanteen waa inaan iska saarnaa qashinka indhaheena ku jira, kadib waxaan arki doonaa in Lionel Messi uu yahay kan ugu fiican adduunka ilaa iyo xad aad u ballaaran”.
DEG DEG: Lionel Messi oo Boorka ku reebay Cristiano Ronaldo....+SAWIRRO
Mourinho oo LABO eray kaliya isaga difaacay saxaafada, kadib markii laga ceyriyay shaqada Manchester United